China Bindu chishandiso ruva kurongedza ruva imba Mugadziri uye mutengesi | Ruiyi
Kunyangwe iwe uri murimi ane ruzivo kana kungokura chete, ino gadheni kititi kit yakakunakira iwe.
Kudzivirirwa kwemiti uye chikafu: Kuderera kweGreenhouse kunogona kuwedzera goho remichero nekupa inodziya uye inovaka nharaunda. Iyo zvakare inodzivirira mhedzisiro yemamiriro ekunze akaipisisa, ichikubvumidza iwe kuti ukure zvirimwa izvo zvisingawanzo kukura zvakanaka munharaunda yako. Unogona kusarudza michero nemiriwo gore rese muchando.
Kubvisa, kutsika, kukotama, kukotama, kutenderera, kupukuta, sandblasting, kupopera, kuongorora, kuungana, kurongedza, kupedzisa chigadzirwa
Kudzivirirwa kwezvirimwa uye kudya: Kuderera kweGreenhouse kunogona kuwedzera goho remiti nekupa inodziya uye inovaka nharaunda. Iyo zvakare inodzivirira mhedzisiro yemamiriro ekunze ekunyanyisa, ichikubvumidza iwe kuti ukure zvirimwa izvo zvisingawanzo kukura zvakanaka munzvimbo yako Unogona kusarudza michero nemiriwo gore rese muchando.
Inokodzera munhu wese anofarira gadheni:Kunyangwe iwe uri murimi ane ruzivo kana kungokura chete, ino gadheni kititi kit yakakunakira iwe. Iyo yemaruva muhari bhokisi inoita yekudyara mahebhu, miriwo uye zvirimwa zvakapusa uye kusagadzikana-kusagadzikana. Shandisa greenhouse kunakidzwa nekuchengetedzwa kwepasi, kudziya uye unyoro mukati, uye zvipembenene nemhuka zviri kure.
Nyore kuungana:yemhando yepamusoro, ngura-chiratidzo, hupfu-yakavharwa, kwakakurudzira simbi gadheni mubhedha nemapurasitiki ekubatanidza kuitira nyore gungano. Iyo yakasimba yakasimba-yepamusoro pevha yegreenhouse kavha inogona zvakare kukurumidza kuiswa pane yesimbi furemu. Uye zvakare, kune ekuchengetedza micheto kumusoro uye pasi. Ivhavha yegreenhouse inogona kuchengetwa zviri nyore muhombodo yakavharirwa kana isiri kushandiswa.
Chengetedza mari: Kukwira kwemitengo yemakwenzi uye zvigadzirwa zvekurima zvinoita kuti kudya kwakanaka kuve sarudzo inodhura. Asi izvi hazvisi izvo chaizvo. Kukura chikafu chako pachako hakunakire chete kumuviri wako nepfungwa, asiwo kune chikwama chako. Gore rega rega iwe unogona kutenga mimwe yaunofarira michero, miriwo uye mahebhu, nemari shoma kwazvo yekudyara!
Nzwisisika Kudzivirirwa:Iyo inotakurika girinihausi yakagadzirirwa kuchengetedza zvirimwa zvako uye kudyara kune yakashata mamiriro ekunze semvura, mhepo, uye chando. Inogona kugadzira yakanakira nharaunda kuti zvirimwa zvako zvikure zvine hutano uye zvinobatsira kuwedzera mwaka wako wekukura!
Eco-Shamwari Pe zvinhu: Tinoshandisa Zvakatipoteredza-zvine hushamwari yakakora Polyethylene (PE) .PE imwe mhando yetemoploplastic nebwe rakagadzirwa ne ethylene polymerized, isina kunhuwirira, isina chepfu, uye ine yakanakisa yakaderera-tembiricha kuramba, kugadzikana kwemakemikari kwakanaka, uye yakanaka acid uye alkali ngura kuramba .
Simba Rakasimba:Iyo greenhouse inotora yemhando yepamusoro tubular simbi pombi sekutsigira kuchengetedza kugadzikana uye pekugara zvirimwa kubva kumhepo. Zvakare, rinorema rutsigiro mambure rakasimba zvakakwana kuti riwedzere mamwe matereyi embeu, zvirimwa zvine poto uye zvimwe zvinhu zvishoma zvekukura kwemiti.
Type Bindu Greenhouses
Zita Rekushandisa QLYD
Chimiro Chinyorwa Simbi
Chimiro Kupedza Upfu Coated
Feature Yakagadziriswa Yakaungana, Eco Friendlt, Rodent Proof, Porta
Mashoko Poly dzakarukwa jira
Model Nhamba OEM
Mhando yesimbi Simbi
Dzvinyiriro Inoonekwa Zvisikwa
Zita Bindu Rinotakurika 3 * 6 * 2 2mTunnel Polt Conservatory
Saizi 300cm * 600cm * 220cm
Kushandisa Kukura zvirimwa uye veggies mwaka wese
Tsika Yetsika Gamuchira
Dhonza Nguva 30days
Uye tumira email ku sales@ruiyitools.com
Nhanho yeKutanga Shandong, China
Pashure: Nzira yemotokari yegungwa
Zvadaro: Kunze kwekuzorora mota
Concrete chisanganiso Rori, China PU Furo vhiri, PU Wheel, China PU Wheel, Caster Wheel, China Kongiri Musanganiswa,